GARASHADA XUKUUMADDA LABA GAR-DAAQA AH. W/Q:- MAXAMED SIDIIQ DHAMME | Hangool News
GARASHADA XUKUUMADDA LABA GAR-DAAQA AH. W/Q:- MAXAMED SIDIIQ DHAMME
Jawaabta weydda ah ee wasaaradda arrimaha guduhu waxay keeni kartaa is-maandhaaf hor-leh, si hubsiimo la’aana oo ka fog milgaha masuuliyadda ayuu uga jawaabay waydiintii warbaahinta sababta loo xidhay Ganacsade Cumar Caydiid Agaasimaha guud ee Wasaaradda Ariimaha Gudaha qaranka Somaliland.
Cabdifataax wuxuu ku tiraabay halka muranku ka taaganyahay haddeer inaany ahayn Tiyaatarka ee ay tahay meel kale. Qoodhiyo xero hadalkaasi ima marine waa is makeeki! Halka muranku ka taaganyahay waa Tiyaatarka Baarkinkiisa ogaalkay haddanay meel kaloo muran ka jiro oo wasaarradu ogtahay jirin.
Agaasimuhu siduu arrinka uga hadlay macquul ma ahayn waxa ka muuqatay xilkasnimo-darro abuuri karta amni-darro, dhibaato qaranka wixii ku keeni kara in laga taxadiro oo aan sidaa masuuliyad darada ah looga hadalbaa habboon. Agasimaha waxa ka muuqatay cadho uu kula kufay Xisbiga Waddani wuxuuse xuquudiisa meel kaga dhacay Ganacsidaha aan xadhigiisa loo marin sharciga ee laga jujuubay gurigiisa isagoon fal-danbiyeed gacamaha kula jirin.
Jawaabta Agaasimaha may ahayn garawshiiyo iyo gartoona, waxa habboonayd inuu sidaa si ka milgo iyo masuuliyad duwan uga jawaabo oo taxadir qaranimo iyo isu-soo dhaweyn shacab sameeyo. Waxaad mooda in la yidhi dabka sii huri oo baatrool kusii afrog mushkiladda maaraha u baahan.
Dhulbadanbaa la bixiyaya sharci iyo sharci daraba wuxuunbuu Tiyaatarkuna la midyahay dhulka qaranka ee la qaydhinka lagu qaybshay sumad gaara kama laha kuwa dhisan ee aan dhibtu ka taagnayn, muranka maanta taagana waa ayaandarro aan loo baahnayn dhismaha gaba-gabada ku dhaw in Baarkinkiisa cid kale la siiyaana waa ceeb qaran oo ugub ah.
Madaxweynaha qaranka waxa looga fadhiyaa inuu si deg-dega xilka uga qaado Agaasimaha aan xilkaska ahayn ee garaadkiisu yahay fidno abuurka bulshada walalaha ah ee loo baahanyahy in looga hadlo arrinkooda si dhexe oo aan lahayn xanaf iyo xasarad. Madaxweyne agaasimahaagu wuxuu duudsiyay xuquqda muwaadinka xaqdarada ku xidhan labada caanamaal ee aan loo marin sifaha sharciga ah xoriyad af-duubkiisa.
Xisbiga Waddani wuxu u taaganyahay ilaalinta xuquuqda muwaadin kastoo la duudsiyo xuquudiisa oo lagu xidho xaqdarro, waxanu u taaganyahay ilaalinta nabadgelyada shacabka Somaliland. Madaxweyne masuulka u sareeya qaranku waa adiga arrinkani waa hal-xidhaale furfrukiisa iyo furdaamintiisu ku hortaale jiifka ka kac.